Fitsarana Ny Raharaham-Pamonoana Mpanao Fihetsiketsehana Tao Torkia Notantaraina Twitter Mivantana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2014 10:13 GMT
Nitatitra ny andro fihainoana faharoa nataon'ny Fitsarana tamin'ny raharaham-pamonoana an'i Ali İsmail Korkmaz tao amin'ny Zaridaina Gezi, notontosaina androany [12 Mey 2014] tao Anatolian Afovoany faritanin'i Kayseri ny mpiserasera maro nanerana ny firenena.
Nafindra – noho ny antony filaminana araka ny nolazaina – ny fitsarana ka tsy natao tao Eskişehir, toerana nisian'ny famonoana, araka ny tatitra nataon'ny gazety mivoaka isan'andro Hürriyet. Na dia nisy aza ny famindrana toerana, nifandamina ny mpikatroka maro avy amin'ny toerana samihafa nanofa fiara fitaterana sy nanatrika ny fotoa-pitsarana.
Ao amin'ny Twitter, mpisolovava sy mpitati-baovao mailaka Efkan Bolaç nizara ity sary tao amin'ny fitsarana feno mpanatrika ity:
Efi-pitsarana ny raharahan'ny mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny zaridainan'i Gezi, Ali İsmail Korkmaz, feno olona (Source: @efkanbolac)
Misy ny mpisolovava sy mpiserasera hafa nitantara ny fotoa-pitsarana toa an'i @cerenkali, @AvGurkanKorkmaz, @apouyan ary @cigdemmater.
Misy sary sy vaovao tselatra hafa azonao jerena amin'ny lahatsoratro manaraka ao amin'ny Erkan's Field Diary.